Facility ဖြည့်အသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder China Manufacturers & Suppliers & Factory
Facility ဖြည့်အသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Facility ဖြည့်အသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ထုတ်ကုန်များ)
ဆေးရုံ O2 Cylinder ဖြစက်ရုံများအတွက်စက်ရုံစျေး
ဆေးရုံ O2 Cylinder ဖြစက်ရုံများအတွက် 1. စက်ရုံစျေး ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထောက်ပံ့အောက်ဆီဂျင် Refill Device ကိုချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စက်ပစ္စည်း Refilling...
ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Cylinder ဖြစက်
1. ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ Cylinder ဖြစက် ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Generator ကိုအောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ Cylinder ဖြစက် compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Cylinder ဖြစက် Atlas Copco...
အောက်စီဂျင်စက်ရုံစနစ် Cylinder ဖြ APP ကိုစောင့်ကြည့်
System ကို APP ကိုစောင့်ကြည့်ဖြည့်အောက်စီဂျင်စက်ရုံ Cylinder 1.Oxygen စက်ရုံ Cylinder ဖြည့်စနစ် APP ကိုစောင့်ကြည့် ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ Cylinder ဖြ System ကိုတိုက်ရိုက် compressed လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
စက်ရုံ Air ကိုခှဲစက်ရုံဖြည့်အောက်စီဂျင် Cylinder
စက်ရုံ Air ကိုခှဲစက်ရုံဖြည့်အောက်စီဂျင် Cylinder စက်ရုံ Air ကိုခှဲစက်ရုံဖျေါပွခကျြဖြည့်အောက်စီဂျင် Cylinders: အောက်စီဂျင်ဆေးဘက်အောက်စီဂျင်လူနာချွေတာဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ, ဆေးရုံအတွက်အထူး, မြေ၌အသက်တာကိုထောကျပံ့တစ်ခုမရှိမဖြစ်ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံ Air ကို Sepaaration စက်ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြည့် ETR အောက်ဆီဂျင်...
Cylinder ဖြဘူတာအဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို Cylinder ဖြဘူတာများအတွက် 1. PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကို ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ Cylinder ဘူတာဖြည့်များအတွက် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ Generator ကိုချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
Containerized အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ 1.Containerized အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူဘူတာဖြည့် ETR containerized PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာဘူတာရုံ Atlas Copco လေကြောင်း Compressor,...
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Hosptial အသုံးပြုမှု PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Hosptial အသုံးပြုမှု PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် 1.Innovation Hosptial အသုံးပြုမှု PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစနစ် ဖေါ်ပြချက် PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြ System ကိုတိုက်ရိုက်ချုံ့လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။...
Cylinder Refill အဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ
Cylinder Refill အဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံ 1.Oxygen Cylinder Refill စက်ရုံဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR Two-မျှော်စင် PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder Refill စက်ရုံတိုက်ရိုက်ချုံ့လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ System ကို refilling အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါ Atlas Copco လေကြောင်း...
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Chine အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ
အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ တစ်ခုမှာနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံဖျေါပွခကျြမှာတော့ 1.All PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာဘူတာရုံ...
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံ
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအောက်ဆီဂျင် Cylinder Refill စက်ကုန်ကျစရိတ်
စက်ကုန်ကျစရိတ် Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder 1.Oxygen စေ Cylinder Refill စက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်စေ Cylinder Refill စက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စက် refilling အောက်ဆီဂျင်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆလင်ဒါ Atlas...
ရောင်းမည်စက်ဖြည့ High Quality အောက်ဆီဂျင် Cylinder
Supply နိုင်ခြင်း: 30 Units per Month
ရောင်းမည်အောက်စီဂျင် Cylinder ဖြစက် 1.Oxygen Cylinder ဖြစက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူစက်ဖြည့် ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာစက် Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC...
Cylinder ဖြများအတွက် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ
Cylinder ဖြများအတွက် PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ 1.Oxygen Cylinder ဖြစက်ရုံဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR Two-မျှော်စင် PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ရုံချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ System ကို refilling အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါ Atlas Copco လေကြောင်း Compressor,...
Cylinder Refill အဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ
Cylinder Refill အဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓါတ်ငွေ့စက်ရုံ 1.Oxygen Cylinder Refill စက်ရုံဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR Two-မျှော်စင် PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder Refill စက်ရုံတိုက်ရိုက်ချုံ့လေကြောင်းကနေ 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ System ကို refilling အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါ Atlas Copco...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပျက်သဘောဆောင်သောဖိအားဖုန်စုပ်စုတ်ယူခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအပျက်သဘောဆောင်သောဖိအားဖုန်စုပ်စုတ်ယူခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ် တစ်ရေလက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်တစ်ဓာတ်ငွေ့-ရေ separator တစ်လေဟာနယ် solenoid valve, ပိုက် fittings နှင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်၏ omposed က c ETR လွတ်လပ်စွာအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနုတ်လက္ခဏာဖိအားလေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းစက်ရုံတီထွင်ခဲ့သည်။...
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြစက်ကုန်ကျစရိတ်
စက်ကုန်ကျစရိတ်ဖြည့်အောက်စီဂျင် Cylinder 1.Oxygen Cylinder ဖြစက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူစက်ဖြည့် ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင် Cylinder compressed ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာစက် Atlas Copco လေကြောင်း Compressor, SMC...
High Quality PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ်
PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility ကုန်ကျစရိတ် ဖျေါပွခကျြအဘို့အတွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility: အီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility နိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ် Cylinder ဖြစက်ရုံ
ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ် Cylinder ဖြစက်ရုံ 1.Oxygen စေ Cylinder ဖြစက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူ, ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ် Cylinder ဖြစက်ရုံချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အတူ...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility ဖျေါပွခကျြအဘို့အတွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility: အီး TR တွင်-site ကို PSA အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့လုပ်ခြင်း Facility နိုင် 93% ± 3% ထုတ်လုပ်ရန် လေထဲကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုတိုက်ရိုက်,...
အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Cylinder Refill အဘို့အစက်
Cylinder Refill အဘို့အ PSA အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုစက် 1.Oxygen ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Cylinder Refill စက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR Two-မျှော်စင် PSA အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Cylinder Refill စက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအဆာစက် Atlas Copco...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူအောက်စီဂျင် Cylinder Refill စက်
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူအောက်စီဂျင် Cylinder Refill စက် 1.Oxygen စေ Cylinder Refill စက်ဖျေါပွခကျြ PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-တပ်ဆင်ထား PSA အောက်ဆီဂျင်စေ Cylinder Refill စက်ချုံ့ဝေဟင်မှတိုက်ရိုက် 93% ± 3% သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ စက် refilling အောက်ဆီဂျင်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆလင်ဒါ...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Facility ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 1. ETR ဆေးရုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Compressed Air ကို Facility ဖျေါပွခကျြ အဆိုပါဆေးဘက် compressed လေထုစက်ရုံလေထု Compressor, ယေဘုယျ filter ကို, ပြီးနောက်-အေး, တိကျ filter ကို, ကာလဖြစ်ပါသည်လေကြောင်းလေမှုတ်စက်, လေကြားခံအကြံပေးအဖွဲ့,...
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ removable Containerized အောက်ဆီဂျင် Facility
Supply နိုင်ခြင်း: 60 Units per Month
စက်ရုံစျေးနှင့်အတူ removable Containerized အောက်ဆီဂျင် Facility removable Containerized အောက်ဆီဂျင် Facility ဖော်ပြချက်: PSA အခြေခံမူနှင့်အတူ ETR အသက်ရှူယန္တရားအောက်ဆီဂျင် Containerized အောက်ဆီဂျင် Facility 93% ± 3% ထုတ်လုပ်နိုင်သည် တိုက်ရိုက်ချုံ့လေထဲကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ငွေ့။...
Facility ဖြည့်အသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder
မိုဘိုင်းအသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြ Facility
Facility စျေး Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder
စက်ကုန်ကျစရိတ် Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder
စက်ဖြည့်အောက်ဆီဂျင် Cylinder ပေး
ဆေးရုံအသုံးပြုမှုအောက်ဆီဂျင် Generator ကို
Facility ဖြည့်အသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder စက်ဖြည့်ရောင်းရန်အောက်ဆီဂျင် Cylinder မိုဘိုင်းအသေးစားအောက်ဆီဂျင် Cylinder ဖြ Facility Facility စျေး Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder စက်ကုန်ကျစရိတ် Refilling အောက်စီဂျင် Cylinder စက်ဖြည့်အောက်ဆီဂျင် Cylinder ပေး ဆေးရုံအောက်ဆီဂျင် Facility ဆေးရုံအသုံးပြုမှုအောက်ဆီဂျင် Generator ကို